Izicathulo, izicathulo zabesilisa, izicathulo zabesifazane - izicathulo zeRuchun
Ama-Safty- izicathulo nama-HikingShoes
Dala futhi wenze amasampula wamahhala ngokuya ngemfuneko yekhasimende.
Yenza ukukhiqiza ngokuya ngokuqinisekisa amasampula kanye nezinye izidingo zekhasimende.
Isikejana sezincwadi sinomhambisi oqokiwe noma umgibeli wethu osebenzisana nathi.
Sine amafektri amabili, imigqa emi-3 yokukhiqiza enesethi ephelele yemishini ethuthukile, ngaphezu kwezisebenzi ezingama-300 zamakhono. Umkhiqizo oyinhloko ufaka izicathulo zezemidlalo, izicathulo ezijwayelekile, izicathulo zokuhamba ngezinyawo zombili zabantu abadala kanye nezingane.Our yethu ukukunikeza izicathulo ezisezingeni eliphakeme ngentengo yokuncintisana!
Izicucu zeLady White RCWP202003
Article No: RCWP202003 Ubulili: WOMEN Co ...
Izicucu zezingane Skate RCKP202002
Article No: RCKP202002 Ubulili: I-BOYS & ...
Izicoco ze-Air Cushion RCW202001
Article No: RCW202001 Ubulili: WOMEN Col ...
Izicathulo ze-Air Cushion RCNP202001
Article No: RCNP202001 Ubulili: GRAY, BLAC ...
Izicucu Zabesilisa Okujwayelekile RCNP202002
Article No: RCNP202002 Ubulili: MEN Colo ...
Izicucu zabesifazane zabesifazane RCWP202002
Article No: RCWP202002 Ubulili: WOMEN Co ...
Izicucu zeMid Cut RCNP202003
Article No: RCKP202001 Ubulili: BOYS Col ...
Article No: RCNP202003 Ubulili: MEN Colo ...
IFuJian JinJiang Ruchun Shoes Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2013 futhi isiseQuanzhou, esifundazweni iFuJian, ihlanganisa indawo enamamitha-skwele angama-9600 futhi inabasebenzi abangaphezu kwama-300. Singomunye wabakhiqizi bezicucu abaqeqeshiwe abasebenza ngokukhethekile, izicathulo zezemidlalo ezinomklamo wemfashini wabesilisa, abesifazane nezingane. Sinezinto ezisetshenziswayo zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme, amakhono azimele we-R&D kanye neQC eqenjini eliqinile.Sebenzisana isikhathi eside nabathengisi abaningi, abathengisi kanye nama-ejenti emhlabeni jikelele.Imikhiqizo edumile esisebenzele kuyo ifana neFILA, US POLO, PIERRE CARDIN, AUSTRILIAN, KAPPA, AIRWALK , I-DUCATI, CHAMPION, UMBRO, njll.
Sinezimboni ezimbili ezinemigqa yokukhiqiza emi-3 futhi sinezimboni ezingaphezu kuka-10 zokubambisana ezisebenza isikhathi eside. Khetha thina kusho ukukhetha intengo eshibhile yesisekelo sekwalithi lomkhiqizo elilinganayo.
Amafektri enza futhi adlulise i-BSCI minyaka yonke futhi akwazi ukubambisana nomthengi ngenza okunye ukubalwa kwamabhuku embonini uma kunesidingo.
Umklamo wobuchwepheshe nethimba lokuthuthuka ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
Ukuhlolwa kwekhwalithi yobuchwepheshe nemishini yokuhlola ukuqinisekisa ikhwalithi enhle.
Yonke imibuzo yakho noma impendulo nge-imeyili izophendulwa kungakapheli amahora angama-24. Futhi uma unethemba lokuphendula ngokushesha, unganqikazi ukufaka i-WECHAT yethu 0086-13030971530.
Isakhiwo seTianqin Technology, iWest Garden District District, Jinjiang, Quanzhou, China
Izicucu zika baba zibuyile ngenxa yeMilan Men's Digi ...
Abaholi bezemfashini nezinyawo bafuna i- "Co ...